Ezé Gold / Grịl - Popular Jewelry
Ihe ngosi akara ngosi pụtara na 1980s n'oge afọ ọhụụ nke hip-hip. Muchdị atụmatụ dị mfe karị n’oge gara aga agbanweela na mgbagwoju anya dịka ụlọ ọrụ ịchọ mma na-eme ka usoro ya jiri nwayọ nwayọ. Ruo afọ 30, Popular Jewelry abụrụla ụzọ nke imepụta ọla ọdịnala; grills bụ sokwa. Site na otu okpu rue ọnụ ọlaedo na dayamọnd— Popular Jewelry emeela ha niile.
Ngwakọta Anyị Ahịa - okwu sitere na anyị.
Dị ka ịdọ aka ná ntị: ndị a abụghị ndị adịghị ike, ọnụọgụ, otu-ha-ụdị ụdị grills- a na-eme ha iwu; omenala ahaziri maka onye ji ya. Ha ga-dabara naanị ndị ahịa e mere ha maka. Enwetụla mgbe mpụ gosipụtara ihe omume ebe ha na-anwa ịmekọrịta profaịlụ eze nke ahụ na ndekọ eze nke ndị na-efu? Ọfọn, amama na nke ahụ bụ a gbalịrị na ezi usoro; profaịlụ eze mmadu puru iche dika nke DNA ya. N’aha oke na mma, anyị na-eme ihe anyị na-ichere ma sie ike iji mee ka ọdịiche dị na ha na nke asọmpi anyị. Ọ bụrụ n ’ibinye ọnụ ọchị ahụ na-egbu maramara nye ndị enyi ịnyịnya ibu gị, ọ ga - abụ na ha ga - ejedebe na iwe jọgburu onwe ya kama - site na ụgwọ ahụ nke eze ahụ mere ka ha na-edozi ezé ha na-agba mbọ ịmanye gị. Dị ka ụdị ọla ọ bụla ahaziri ahaziri, a na-eji ihe eji emepụta ihe eji arụ ọrụ nke ọma. Ihe igwe nri anyị na-amalite na $ 150 (otu mkpuchi ọla ọcha) wee si ebe ahụ gbagoo. Mee ka ezé gị mee nke ọma. Ebe a. Enweghị onye etiti. Ejiri mpako mee New York.
Ozi achọrọ & ihe ị ga-atụle mgbe ị na-etinye iwu gị.
1) Oke ma ọ bụ nke ezé dị elu? (N'elu / kalama)
2) Ole ole na ole ezé? (Incisors, Canines, Molars)
3) typedị ọla dị mma? (Sterling Silver, Gold (10K, 14K, 18K), Platinum)
4) Kedu ụdị agba? (Rose, White, Yellow)
5) Kedụ ụdị imecha ahụ? (Emechara, Mat. Wdg)
6) Nhazi nkọwapụta? (Ihu zuru / emeghe / oghere) wdg.
7) you ga - achọ itinye ha nke gemstones.
Kedu ụdị & agba?
8) Ọ bụrụ na ị ga - emeli, biko nyefee ihe osise / sketị / foto / ihe iji nyere anyị aka ịghọta ụdị ụdị ị na - achọ.
9) you na-eme atụmatụ ịrụ ọrụ ezé ọ bụla na ezé gị n'oge na-adịghị anya (nke a nwere ike imetụta ụzọ ha dabara na mgbe e mesịrị). Anyị na-akwado usoro usoro eze ọ bụla na-aga n'ihu / na-aga n'ihu ka emechaa tupu itinye akwụkwọ nri maka iji hụ na oge ịdị mma gị ga-adị.
Green Diamond Omenala Grịl
Solid Bottom asatọ-Ezé Laser kanye Grịl
Otu-Cap Open Window
Top Griị Na-acha ọcha ezé (Yellow Gold / White Gold)
Full-Set Solid Plain Grịl
Ogwe ndị agbapụtara agba (White Diamond; Pavé Stonesetting)
Achịkwa Ngwa Ọdịnala (mkpụrụedemede Kanji maka “mmụọ mmụọ”)
Achịcha Azụmaahịa (Akwụkwọ Ahụ Ọrịa Cannabis)
Ojiji A Na-ahụkarị (Playboy Bunny)
Omenala Ndị Ahịa Etu (Cross)
Ududo Diamond / Mepee Mee
Idei mmiri zuru oke (akwa osisi; ọla edo na sapphires)
Mepee Emepe Emepụtara-Nke
Mmepe Egwuregwu Diamond-Cut
Ududo Diamond (Abụọ Abụọ)
Egwuregwu Classic Fangs
Ntapu (n'okpuru ahiri naanị)
Ajị Egwurugwu (Silver)
Ogwe amịpụta (agbapụta ọwa; 2 ahịrị)